နိုင်ငံရေး, Porn နှင့်စွဲအာရုံကြောသိပ္ပံ (2012) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
နိုင်ငံရေး, Porn နှင့်စွဲအာရုံကြောသိပ္ပံ (2012)
လုယူသောသူသတိပေးချက်: ကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုနှစ်သက်သည်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတားမြစ်ရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် Santorum ၏နိုင်ငံရေးအပေါ်သည်းခံမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ငါတို့ဘာသာရေးလည်းမဟုတ်ဘူး။ ထိုအရာကပြောသည်မှာ Ricky ကလေးသည်အင်တာနက်စွဲစွဲလမ်းမှုအငြင်းပွားမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အရာဖြစ်သည်။ ရှိပါတယ် အင်တာနက်စွဲ၏လယ်ပြင်တွင်အရေးကြီးသောအသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု, သုံးရင်နှင့်စွဲလက္ခဏာအသိအမှတ်ပြုအတွက်အသုံးပြုသူများအကူညီပေးဖို့တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ဘုံအသိပညာဖြစ်လာဖို့လိုအပ်ရာ။
အတော်များများတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ် စိတ်ဆင်းရဲလက္ခဏာတွေ, အရာအများစုကိုစွဲ-ဆက်စပ်အဖြစ်အထူးကုသဖြင့်မှတ်မိကြသည်။ (ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် သည်းခံနေခြင်း နှင့် ဆုတ်ခွာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ။ ) သတင်းကောင်းစွဲရောဂါလက္ခဏာတွေမကြာခဏဖြစ်ပါတယ် နောက်ပြန်လှည် အဆိုပါဝေဒနာသည်မှန်ကန်စွာသည်သူ၏အပြုအမူသည်သူ၏ဦးနှောက်နှင့်အပြောင်းအလဲများကိုသင်တန်းပြောင်းလဲထားပြီးဘယ်လိုနားလည်လျှင်။ အဓိကစွဲအလုပ်မှာကြောင်းဝန်ခံသည်အထိတိုင်, ထိခိုက်သောသူတို့သည်မကြာခဏများမှာ ရောဂါရှာဖွေမှုမှားယွင်း နှင့်သူတို့၏အခွအေနကိုပြောင်းလဲအာဏာမဲ့ခံစားရတယ်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ Santorum ၏မှတ်ချက်များကိုကျွမ်းကျင်သောတုံ့ပြန်မှုများကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်သစ်စီးဆင်းမှုကိုတားဆီးရန်အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သတင်းစာဆရာတစ် ဦး က Santorum ၏ပြောဆိုချက်ကိုမကြာသေးမီကစစ်ဆေးရန်ကြိုးစားသောအခါ၊
အမျိုးမျိုးသောပညာရေးဆိုင်ရာ sexologists replied:
ကြောင်းကြေညာချက် back up လုပ်ထားဖို့မျှတရားဝင်သိပ္ပံလုံးဝရှိပါသည်။ အဆိုပါပြောဆိုချက်ကိုတဦးတည်းအစင်းသို့မဟုတ်အခြားများ၏ ideologues အားဖြင့်အခါအားလျော်စွာလုပ်ပေမယ့်မဆိုအခြေခံအချက်ကို-စစ်ဆေးခြင်းကိုထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများသူတို့ကိုနောက်ကွယ်ကဘယ်သူမျှမအဓိပ္ပါယ်ရှိသောသက်သေအထောက်အထားရှိသည်ဟုထုတ်ဖော်ပြသနေသည်။ -JC ပါရဂူဘွဲ့
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းသည် cortical atrophy ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောအယူအဆ? အဲဒါကိုငါတို့မမြင်ရဘူး။ —RR PhD
ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်ပင်ဦးနှောက် changes. -ဘီစီပါရဂူဘွဲ့ဖေါ်ပြခြင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတစ်ခုတည်းလေ့လာမှုမရှိပါ
ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်စာဖတ်သူများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများ၏ ဦး နှောက်ကိုသီးခြားခွဲထုတ်ထားသည့်လေ့လာမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
တစ်ခုကတိကျမှန်ကန်ကြေညာချက်ကြောင်းထောက်ပြမယ်လို့ အင်တာနက်စွဲ လေ့လာခဲ့ထားပြီး ရောဂါလက္ခဏာများ၊ အပြုအမူများနှင့်စွဲလမ်းမှုအားလုံးနှင့်ဆက်စပ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ စကားမစပ်, အင်တာနက်စွဲလေ့လာမှုများမ ထုတ်ပယ် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးခြင်း။ သူတို့ဟာရိုးရှင်းစွာမကျင့် ဝိုင်းပယ် က။
“ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုယ်တိုင်ကအန္တရာယ်မရှိဘူး။ တကယ်တော့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ် ဦး တည်းသုံးစွဲသည်ဟုယူဆရန် neurobiological အကြောင်းပြချက်မရှိပါ - မည်သူမဆိုအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုသည်ဟုယူဆခြင်းဖြစ်သည် သာ porn-သည်များအတွက် နည်းသော အခြားအင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများထက်ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်ဖွယ်ရှိ။
ဆန့်ကျင်တွင်, အညီ ဒတ်ခ်ျသုတေသီများအွန်လိုင်း erotica အဆိုပါရှိပါတယ် အမြင့်ဆုံး စွဲလမ်းဖြစ်လာဘို့မဆိုအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့အထီးကျန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများအစီရင်ခံအင်တာနက်စွဲ၏နှုန်းထားများဖွယ်ရှိမြင့်တက်လိမ့်မယ်။ သာနုပျိုအထီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်လျှင်ထိုသူတို့ကဆက်ဆက်ပိုမိုမြင့်မားပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက်စွဲ၏နှုန်းထားများအတွက် မြီးကောင်ပေါက် နှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ 18% သကဲ့သို့မြင့်မားသောဖြစ်ကြသည်။ အဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုအတွက်စမ်းသပ်ပြီးယောက်ျား၏လေးပုံတပုံစွဲခဲ့ကြသည်, ဆယ်အမျိုးသမီးအတွက်တဦးတည်းမှအနီးကပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသုတေသီများကလည်း,
အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း, ဖြစ်နိုင်သည်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါအဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုကြုံတွေ့ရအသုံးပြုသူမှဦးဆောင်အနည်းငယ်သာအိပ်ကြာရှည်စွာအဘို့စားရန်ပျက်ကွက်ခြင်း, ကန့်သတ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, OCD စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal တစ်ဦးမြင့် level ကိုဖန်တီးနိမ့်မိသားစုဆက်ဆံရေးနိုင်ပြီး စိုးရိမ်စိတ်။
သိသာထင်ရှားတဲ့, အင်တာနက်စွဲလမ်းတွေ့ရှိချက် ပတ်သက်. အချက်အလက်များအထက်တွင်ကိုးကား sexologists ၏အထင်မြင်မှားစေသောထုတ်ပြန်ချက်များအနေဖြင့်တစ်ဦးအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုတင်ပြ။
အောက်ပါအချက်များကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ - စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်လာမည့်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာစာရင်းဇယားဆိုင်ရာလက်စွဲစာအုပ် (DSM-5) သည်လောင်းကစားအားကစားသူများကိုဘလက်ဂျတ်၊ ကစားခြင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဖဲချပ်စ်များကိုသီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းမရှိဘဲစွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားသို့ပြောင်းသွားလိမ့်မည်။ ယခုသိပ္ပံပညာကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုပြသခဲ့သည် အခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာထပ်တူများကဲ့သို့အမှန်တကယ်နှင့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါက၊ လိင်ပညာရှင်များကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်အထီးကျန်စွာလေ့လာရမည်နည်း။
စကားမစပ်, အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖြစ်ကြောင်းပြသကြ စွဲလမ်းပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင် အရွယ်ရောက်သော ဦး နှောက်များထက်ကလေးများအားထိခိုက်မှုရှိသည်ဟု Santorum ၏အခိုင်အမာပြောဆိုချက်အတွက်သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုစွဲစွဲလမ်းမှုအတွက်ပိုမိုကြီးမားသောအားနည်းချက်ကိုပင်တွေ့မြင်နိုင်သည် အပျိုပေါက် တိရစ္ဆာန်များ.
ဂျာနယ်လစ်အပေါ်ယံအကြံဥာဏ်ရရှိခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကိုနှိုးဆွခြင်း (ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများ) သည်ထူးခြားသောအစွမ်းအစအသစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူအချို့ကအသိအမှတ်မပြုရသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်ပါကလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်သည်ဟုသူတို့ကတွက်ချက်သည်။ ၎င်းသည်သီးခြားဘာသာရပ်များတွင်အထူးအန္တရာယ်ရှိကြောင်းသက်သေပြသည့်တိုင်အောင်အန္တရာယ်မကင်းဟုယူဆရသည်။
သူတို့မှားနေပြီ အချည်းနှီးဖြစ်စေ၊ ninjas ဖြစ်စေအမြန်နှုန်းမြင့်ဝတ္ထုကိုနှိုးဆွမှုသည် ဦး နှောက်အချို့ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်စွမ်းအားရှိသည်။ မဟုတ် အရေအတွက် မဟုတ် အကြောင်းအရာ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏စွဲလမ်းမှုကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်။ ဘယ်တော့လဲ သုတေသီများစမ်းသပ်ပြီးညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်အချိန်ဖြုန်းခြင်းထက်ရှာဖွေခြင်းအသစ် (အပလီကေးရှင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း) အတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ “ porn” ကိုသတ်မှတ်ရန်တောင်းဆိုချက်သည်ကောက်ရိုးအမျိုးသားများဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ဒါဟာခြေထောက်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကရိုက်တာများအတွက်ထွန်းလင်း။ အရသာများသည်ထူးခြားပြီး dopamine တုန့်ပြန်မှုလည်းရှိသည်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်၏ရွေးချယ်မှုသည်အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလွှင့်ပစ်လိုက်လျှင် သင့်ဦးနှောက် Over-စားသုံးမှုသို့, သင်စွဲသို့လျှောနိုင်ဘူး။
အဓိကအချက်ကဒီနေ့အင်တာနက် porn ဟာ ဝေးဖယ်ရှား အတိတ်၏ erotica မှ၎င်း၏အလယ်အလတ်၏။ တကယ်တော့၊ ညစ်ညမ်းတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာတွေကိုသာဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ porn အသုံးပြုသူများမှကျွန်တော်တို့ကြားသိခဲ့ရပါတယ် ပြီးနောက် သူတို့ highspeed တယ်။ (အားလုံးဆိုက်ဘာ erotica စွန့်ခွာတဲ့လအနည်းငယ်အတွင်း၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်။ )
ဒီ porn ရဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးချိတ်သည်ကြည့်ရှုသူအထွတ်အထိပ်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေ ဦး နှောက်ထဲကို dopamine အဆက်မပြတ်စီးဆင်းစေခြင်း၏စွမ်းအားဖြစ်သည်။ (Dopamine သည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အာရုံကြောဓာတုဖြစ်သည်။ ) အသစ်အဆန်း - ကလစ်တစ်ချက်၊ ပြတင်းပေါက်မျိုးစုံ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ရှာဖွေခြင်း၊ တိကျမှန်ကန်စွာပစ်မှတ်ထားသည့် fetish ဗီဒီယိုများနှင့် ဦး နှောက်အားလုံးသည်မျှော်လင့်ချက်များအားအဆက်မပြတ်ချိုးဖောက်သောပစ္စည်းများ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ဟောင်းနွမ်းခေတ်ကောင်းသော (အကြိုအမြန်မတိုင်မီ) တစ်ကိုယ်တော်လိင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုအားကောင်းစေတယ် (ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ dopamine ကြောင့်လည်း) Porn သည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုကိုအားဖြည့်ရန်အစွမ်းထက်သောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်အားကိုအသုံးချခြင်းအားဖြင့် porn သည်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအင်တာနက်အပန်းဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ကြည့်ရှုသူများစွာအတွက်မူအပျော်အပါးကိုလိုက်စားခြင်းသည်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။
စွဲက Facebook သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဂိမ်းနှင့်အတူဖြစ်ပျက်နိုင်လျှင်ကြောင့်အင်တာနက်ကို porn နှင့်အတူဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။
'စွဲလမ်းမှုသည်ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ များစွာသောမဟုတ်' (ASAM)
အထက်ဖော်ပြပါသတင်းစာဆရာသည် Santorum ၏စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ စွဲအထူးကုများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါကသူသည်အာရုံ၏အာရုံကြောသိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုကြောင့် ၄ င်းတို့၏စွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်တစ် ဦး ချင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုလေ့လာရန်မလိုအပ်တော့ကြောင်းသူသိရှိခဲ့ပေလိမ့်မည်။ အဲဒီအစား, အာရုံအသုံးပြုသူအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့လူများသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများမဖြစ်ပေါ်ဘဲအပြုအမူများ / ဓာတုပစ္စည်းများကိုအလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ခြင်းတွင်ပါဝင်နိုင်သည်။ အခြားသူများကမရနိုင်သည်နှင့်စွဲဖြစ်လာသည်။ ဒါမဟုတ်ဘူး လှုပ်ရှားမှု ဒါကစွဲလမ်းစေတယ် ဒါဟာအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုပါပဲ ပိုပြီး တစ်ဦးချင်းစီလွယ်ကူစွာထိခိုက်။
ထိုမှတပါး, ကျယ်ပြန့်သုတေသနကြောင်းနှုတ်အကဲဖြတ်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် ရလဒ်များကို Correlate တိကျတဲ့ ဦး နှောက်နှင့်အတူအားလုံးစွဲဘုံအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာ့အထင်ရှားဆုံးစွဲအထူးကု (အမေရိကန်ဆေးစွဲမှုဆေးပညာ၊ သို့မဟုတ် ASAM) သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အများပြည်သူကြေညာချက် diagnosticians ယေဘုယျအားဖြင့်တိကျသောအကြောင်းကိုတောင်းစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်းအကဲဖြတ်ရန်နိုင်သည်ကိုကြေညာ ဆိုင်းဘုတ်များ, ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အပြုအမူ.
ဒီတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌, ASAM လည်းဖော်ပြထားသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ နိုင် (အချို့လူများ၌) စစ်မှန်သောစွဲလမ်းမှုဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ထားသည့်သုတေသီများသည်အင်တာနက် porn သည် neurobiological အဆင့်ရှိအခြားအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းတစ်နည်းနည်းဖြင့်သက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိပါကစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုမရှိပါ။ အစဉ် အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲသီးခြားပြုမိ။ အထူးကုတိကျစွာများအတွက်အကူအညီရှာကြံမည်သူမဆိုအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ် မည်သည့် ကအထီးကျန်အတွက်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်စေမစွဲလမ်း။ သူတို့ကဦးနှောက်ကို Scan ဖတ်တီထွင်ခဲ့ကြတာရှည်မတိုင်မီဒါကိုပြု၏။
ဂျာနယ်လစ်မှကိုးကားခဲ့သော sexologists သည်စွဲလမ်းမှုသည်ရောဂါတစ်ခုတည်းဖြစ်ကြောင်း ASAM ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုသတိမပြုမိပုံရသည်။ သူတို့တောင်းဆိုနေတဲ့သုတေသနကပိုလျှံလိမ့်မယ်။ (၏တောင်းဆိုမှုကိုမှာ စိတ်ပညာယနေ့တွင်အယ်ဒီတာ၏စွဲလမ်းမှုသုတေသနအခြေအနေကိုအတည်ပြုသည် Donald L ကိုဟီလ်တန်, MD.)
ပြန်လည်ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော mojo နှင့်အကောင်းမြင်တတ်သည့်အမျိုးသားများသည်စိတ်ပျက်အားလျော့နေသောအမျိုးသားများထက်သူတို့၏မှားယွင်းမှုများကိုဖြေရှင်းရန် (နှင့်နိုင်ငံရေးလှည့်ဖျားမှုကိုတန်ပြန်ရန်) ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့၏ယုံကြည်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ (အမျိုးသမီးများအတွက်လည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ )
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာဒေါသကိုဖန်တီးရန် Santorum သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မုန်းသည်။ သို့သော်အဖြေမှာသက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူအားလမ်းလွဲစေရန်မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသုံးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်အပေါ်သီးခြားသုတေသနပြုထားခြင်းကိုဆိုလိုသည်မှာမှားယွင်းပါသည်။ အင်တာနက်စွဲလမ်းသူများတွင် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုမရှိကြောင်းမည်သည့်သုတေသနကမျှမဖော်ပြခဲ့ပါ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာသုတေသနပြုချက်အားလုံးသည် ဦး တည်ရာတစ်ခုတည်းတွင်သာရှိသည်။ ၎င်းသည်အခြားအပြုအမူနှင့်ဓာတုဗေဒစွဲသူများတွင်တွေ့ရသောအခြေခံကျသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြသည်။
တချို့ကနှင့်မျှော်လင့် အများဆုံး, အမူအကျင့်စွဲအတူလိုက်ပါသောစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများများမှာ နောက်ပြန်လှည် အခက်အခဲနှင့်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ. မကြာသေးမီကအင်တာနက်စွဲလေ့လာမှုများ၏လျှံနှစ်ခုကနေသက်သေအထောက်အထားကြောင်းထိန်းချုပ်အုပ်စုများအတွက်ပြသ ဟောင်းတဦး အင်တာနက်ကိုစွဲသည်အန္တရာယ်ရှိသောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုပြီးသားသူတို့ကိုယ်သူတို့ reverse မှစတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုယခင်မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများကအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖြတ်၏လအနည်းငယ်အတွင်းသတင်းပို့သည့်လေးနက်တိုးတက်မှုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ မြင် Self-အစီရင်ခံစာများ.
စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့်လိင်ပညာရှင်များ။ Santorum-esque နိုင်ငံရေးသမားများကိုသူတို့နေရာတွင်ထားလိုသည်ကိုသင်မြင်လိုလျှင်၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းစေနိုင်တယ်လို့ပြောစရာမလိုဘူးဆိုတာသူတို့ကိုမလှည့်စားပါနဲ့။ သူတို့၏ erotica အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုမှသူတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုသူတို့အားမပြောပါနှင့်။သက်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာများ, "သောအစွမ်းထက်စိတ်ကို - numbing မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူသောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၏အဖြစ်မှန်အကြောင်းကြားခြင်းဖြင့်သူတို့၏တွင်းနက်များကိုတူးဆွခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ကူညီပါ။
ဂျာနယ်လစ်များ - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသိပ္ပံပညာအကြောင်းသင်ကြားလိုလျှင်အနီးကပ်စိတ်ပညာရှင်မဟုတ်ဘဲစွဲလမ်းမှုအထူးကုသို့သွားပါ။ (လိင်ပညာရှင်အတော်များများကအမှန်တရားကိုနားလည်တယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်ပါ။ ) ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့မေးခွန်းကိုမေးပါ။ မှန်ကန်သောမေးခွန်းမှာ“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်မကောင်းသောအကျိုးဆက်များနှင့် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်း Santorum ၏ပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံရန်သုတေသနအထောက်အထားရှိပါသလား” ဖြစ်သည်။
ဤမေးခွန်း၏အဖြေမှာ“ ဟုတ်ကဲ့၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအားလုံးသည်ထိုစွမ်းအားရှိသည်။ ”